ST TYPE FIBER OPTIC ADAPTER, China ST TYPE FIBER OPTIC ADAPTER Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltd
Imba>chigadzirwa>Optical Adapter / Attenuator Series>ST mhando > Chigadzirwa chigadzirwa
Fiber optic adapters, anowanzozivikanwa se flanges uye maadapter, ari fiber optic connector centering kubatana. LC fiber optic adapters anoshandiswa kumisikidza pakati LC-mhando fiber optic zvinongedzo.
1. Yepamberi kukuya nekumisikidza kuve nechokwadi chekutsauka kwepakati peiyo fiber, uchishandisa yakanyanya tembiricha, acid-base, yakanyanya kuomarara zirconia sleeve, ine yakanaka oparesheni kuita uye yakakwira michina kugadzikana.
2. Inogona kudzvinyirira ruzha rwechidzitiro chepasi, kubvisa kukanganiswa kwepasi, uye nemagetsi kupatsanura munda wesignineti kubva kune main control terminal, kudzivirira kukuvara netsaona kune huru yekudzivirira system.
3. Kuchinjaniswa, kudzokororwa, kugadzikana kwepamusoro, kurasikirwa kwekuisa kwakadzika, kurasikirwa kukuru kwekudzoka, uye kudzokororwa kwekuisirwa uye kubvisa nguva kwakapfuura kagumi nguva.